Maitiro ekuisa watchOS 3 beta 1 isina kodhi yekuvandudza | Ndinobva mac
Maitiro ekuisa watchOS 3 beta 1 isina account yekuvandudza
Tiri kutarisana neshanduko hombe dzakaitwa kune yekushandisa system yeApple's smart watch, iyo Apple Watch. Ichokwadi ndechekuti wactOS 3 isisitimu inoshanda iyo inowedzera zvakawanda pamusoro peiyo yazvino vhezheni, asi vhezheni huru uye inotarisirwa kwazvo hapana mubvunzo kuti ndiyo inobata zvakananga iyo kumhanya mukuvhura kunyorera.
Asi kwete chete isu tine uyu mukana mune iyo nyowani wacthOS 3, iyo inonakidza nhau asi inofanirwa kucherechedzwa nekuyambirwa tisati tapinda mune iyo nyaya yekuti patino simudzira kune iyo watchOS 3 vhezheni hapana kudzokera kumashure zvinogonekaIzvo zvinodawo kuve neiyo iPhone zvakare yakagadziridzwa kune iOS 10. Kusiyana neMacOS Sierra yatinoziva kuti ichagamuchira beta yeruzhinji muna Chikunguru, parizvino muIOS hapana ruzivo rwekuburitswa kweruzhinji beta.
Asi ngatione kuti zviri nyore sei kuisa iyi vhezheni chero bedzi tine iOS 10 yakaiswa pane yedu iPhone. Chinhu chinotevera chatinofanira kujekesa zvakare ndechekuti hapana kudzokera kumashure kuOSOS 2 inogoneka saka nemapoinzi maviri akajeka aya tinoenda kune nyonganiso.
Chinhu chekutanga uye chakakosha kutora kubva heino nhoroondo uye kana tangova nayo, inotibvunza iyo nzvimbo kwatinoda kuiisa, isu takasarudza iyo Apple Watch uye makagadzirira. Mushure meizvi zvinodiwa reset wachi, tinoipa uye kana tangotangazve tinobaya General> Software kugadzirisa, uye watchOS 3 ichaonekwa. Isu tinodhawunirodha ndipo patichange takareba uye ndizvozvo.
Matanho ari nyore kwazvo uye neprofile isu tichakwanisa kuita kuiswa kweiyo itsva watchOS 3 pane yedu Apple Watch. Funga nezve iyo nguva inotora yekuvandudza iyo wachi sezvo ichave yakareba, sekunge neazvino zvichangoburwa zvechigadzirwa, iyo wachi inoda nguva yakawanda yekugadzirisa saka iva nemoyo murefu. Imwezve tsananguro yekuisa mundangariro ndeyekuti beta shanduro dzinopera uye kana isu tavandudza wachi ichave iri nguva yekuramba uchivandudza kudzamara kwekutanga kweshanduro yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuisa watchOS 3 beta 1 isina account yekuvandudza
Beta ichave riinhi?
Pindura kuna Charip
Jose Arnau akadaro
Unosarudza sei kuisa chimiro pane wachi yeapuro? ingoita kuti iiswe pane mac
Pindura kuna Jose Arnau
Ini ndatoziva kuzviita sei: yakaiswa kubva kune nhare, kwete kubva kumac.
Chrome ichave 47% nekukurumidza kubva munaGunyana pane macOS
Ireland Data Center mafambiro ekufambisa